Miyaad i tusi kartaa sidii dib loogu heli lahaa backlinks iyadoon waxyeelleynin qiimeynta?
Ka hor intaadan ku tusin sida loo helo qaabka ugu fiican uguna adigoon adigu naftaada u galin rigoore,. Uma baahna inaad sheegto in aad u malaynayso in aad dhiseyso isku xirnaanta tayada si aad u furtid gaadiidka raadinta badan ee shabakadaada ama blogkaaga. Waxaa laga yaabaa in laga yaabo inay weli tahay mid aad u ballaaran oo wali ah mid aad u ballaaran oo shaqeynaya si ay u kasbadaan. Sidaa daraadeed, mid waa inuu had iyo jeer abuuro nuxur weyn si loo soo jiito xiriiro badan oo dabiici ah, i. e. , habka ugu badbaado ee suurtogalka ah. Laakiin su'aashu way sii jirtaa - sida dib loogu soo celiyo qoraallada bogga leh ee rafcaanka, taas oo la bixiyay si ay u soo jiito dhagaystayaasha joogtada ah iyo si wadajir ah ugu soo jiidato boggaaga ama blogka, waxaad horayba ubaahantahay in aad leedahay xiriir fiican oo xidhiidh ah - dadka soo booqda iyo iyaga oo kuu ogolaanaya inay kugu xiraan?
Mawduuc waa King - Waji badan iyo in ka badan
Waxay micnaheedu tahay inaad u dhaqmayso si firfircoon oo aad bilowdo inaad ka shaqeyso boggaaga gaarka ah. Laakiin waxaad rabtaa inaad ogaato sida dib loogu soo celiyo si ammaan ah si aanad uga walwalsaneyn saameynta ay suurtagal tahay in ay waxyeelo gaarsiiso boggaga internetka ama blogka, sax? Aynu wajahno - ka ilaalinta ganaaxyada la xidhiidha dadaalka dhismaha ee wadaagga ah ma ahan wax ku saabsan nasiibkaaga - waa wax walba oo ku saabsan helitaanka dhabarka tayo sare leh oo dabiiciyan ah. Waxay micnaheedu tahay in haysashada dhabtii dhabta ah ee dabiiciga ah oo leh qoraalo si wacan loo dhigo oo lagu meeleeyo aaladda saddexda dhinac ah ee la isku halleyn karo oo ku xiran naftaada ama ganacsiga ganacsiga - marna laguma ciqaabi doono. Oo waxay timaaddaa iyada oo aan sheegin in wax kasta oo mushahar ah, sarrifka ama mashruucyada dhismaha xiriirka ah laga fogaado haddii aadan rabin inaad ku soo qaadato calan casaan leh Google iyo inaad kasbato nadiifinta rikoorka deg dega ah oo badanaa lagama noqonaayo.
Halkan waxaa ah sida loo helo backlinks of tayo sare si ay ugu raaxaystaan ​​si deg deg ah kor loogu qaado taraafikada webka - tayada muhiim ma aha oo kaliya inaad dareentid ammaan ah laakiin si aad ugu adeegto si fiican u guurto mashruuca oo dhan ujeedooyinka caalamiga ah ee SEO ee cabirka. Sidaa darteed, hoosta waxaan rabaa inaan ku qoro laba waji oo muhiim ah oo kaa caawin kara inaad sameysid maqal muuqaal ah - dabcan, badanaa oo ah dhismaha xiriirka.
Waa Inaad Si Fiican Uga Qaadato Macluumaadka Bixinta Lacageed Lacageed
. Ma aha fikir waalan - marka laga reebo, wax walba oo jira oo gaar ahaan loogu talagalay baahidaada waa qiimo bixinta. Ugu yaraan bilowga, illaa aad ka heshid xawaaraha iyo awoodi doona inaad xakamayso qaybo ka mid ah maqalka codka iyada oo aan wax caawimaad ah saddexaad. Tilmaam: marnaba ha u diyaargaroobin ficil aad u fara badan, waxaad si fiican u dhaqmi lahayd si aad u dhaq-dhaqaaq ah oo aad u bilowdo fariin email ah, soo bandhigid naftaada, mashruucaaga internetka, iyo dabcan kharashka ku filan waqti aad ku qiimeyso qoraallo kasta oo rajo leh ka hor inta aanad shaqaaleysiin. Cilmi-galinta - Cilmi-bixintaada ugu wanaagsan ee bixiso Adiga oo bixiya waqtiga
Inta badan, marka ay timaaddo in aad dib-u-qabso ku shaqeysid adiggaaga shaqsiyeed, inta badan annaga si qaldan u aamminsan yihiin in mawduucyada martida ahi ay tahay malaha kaliya ee la qaban karo. Laakiin taasi ma aha sheekada oo dhan, waan ku ballan qaadi karaa. Halkan waxaa ku qoran liis kooban oo ku saabsan qodobka qodobbada ee tixraaca mustaqbalka:
Isku day inaad qorato qaar ka mid ah boosteejada caadiga ah ee martida si ay u helaan mudnaanta gadaal. Taasi waxay u fiicnaan laheyd bilawga kickass, laakiin waddadani maahan mid wax ku ool ah si loo dhiso xiriir adag oo xoog leh.
Tixgeli maalgashigaaga iyo dadaalkaaga si aad u abuurto noocyada soo socda ee ugu muhiimsan ee la wadaagayo iyo isku xirnaanta, sida hagayaal wax ku ool ah, barashada kiis-keeda, rafcaanka riwaayadaha, waraaqo waxtar leh, iwm. Ogow: isku day in aad qayb ka qaadato qayb ka mid ah waxyaabaha aad hadda haysatid - Ma u baahnid inaad dib u soo celiso muraayadda, sax?
Si joogta ah u shaqeeya si aad u bilowdo joogitaanka internetka ee warbaahinta bulshada oo kaliya maaha inay dhiirigeliso waxyaabaha aad la wadaagi karo iyo kuwa la wadaagi karo laakiin si kor loogu qaado magacaaga ama ganacsigaaga isla markiiba.
Wixii ugu qiimo badan ee aadka u qiimo badan ee ka soo jeeda meelo waxbarasho ama dawladeed oo la socota PageRank iyo miisaanka isku xirka, tixgelinta sameynta deeq waxbarasho, tartan, ama xitaa daacadnimo dhiirigelin leh - u siiyaan sheeko khaas ah oo qeexan dhab ahaan waxa ay rabaan inay maqlaan. Xasuuso, qiimaha ugu muhiimsan iyo safka dib u dhiska ma aha oo keliya lacag kadib Source .